Kwinqaku elithi "Iimpawu zokuPhukisa kwePostpartum" uza kufunda ukuba yintoni ukuxinezeleka kwangemva kokubeleka, iimpawu zayo nendlela yokujongana nayo. Iinyanga ezilithoba zokulinda. Iinyanga ezilisithoba-kangangokude kwaye, ngelo xesha, ngokukhawuleza. Kungekudala umntu omtsha uza kuzalwa! Ukukhulelwa okupheleleyo okuliphuphayo, kungekudala uza kuba ngumama kwaye ulindele phambili kwimizuzu ebonwabileyo, ebaluleke kakhulu. Kwaye ngoku, ekugqibeleni, kufike! Ngoku ungumama! Iqhayiya, uotyiswa ngubaba, ngokugubhazela ebambe umntwana ezandleni zakhe, ukuvuyisana ngezihlobo kunye nabahlobo, izimbali kunye neebhaluni eziqhakazileyo, iigleke ezimnandi, iibhokisi ze-chocolates. Kodwa, ngelishwa, konke oku okwethutyana kwaye ebomini bethu kukho indawo kuphela yeeholide, kodwa kwimini yegrey weekdays. Kwakuyixesha lokucoca, ukusetyana, ukupheka kunye nokuthungula ukuphela.
Ngeentsuku ekugqibeleni wenze into ethile, jiquke njengesiqhelo, kodwa awukwazi ukubona umsebenzi. Wena unjengokuthi utshabalalisiwe, udityaniswe ngento ethile, ngokuqinisekileyo zonke izinto ziwela ezandleni zakho, isimo sakho sitshintshile yonke imizuzu: uyonwabile, ngoko ke, ngokukhawuleza, lila into ethile, ungafuni ukuyidla, akukho nto iqondayo ngabantu bakho abathandekayo, kwaye umonde uhamba ngokugqithisa. Yonke le miqondiso ifana kakhulu neempawu zokudakumba kwe-postpartum.
Uxinzelelo lwePostpartum ngokuqhelekileyo imeko yesikhashana echaphazela abafazi emva kokuzalwa komntwana. Ivavanywa ngumama weshumi oneminyaka engama-25 ukuya kwe-45. Inokuqala nanini na emva kokubeletha. Ukuphazamiseka kwengcinezelo yokuhamba emva kokubeleka kukuzalwa komntwana, kuba le nto ibaluleke kakhulu kwintsapho yonke, kunye nangomama ngokukodwa. Ukunyamekela i-crumb, uhlala exhalabisa, ukukhathazeka, kunye nobusuku bokulala ubangela ukukhathala. Ubungakanani beendawo zokudakumba ezidlulileyo emva kokuphuma kwinyanga ukusuka kwiinyanga ezimbalwa ukuya kunyaka kwaye kaninzi kufuna uncedo. Ziziphi - iimpawu zokudakumba kwe-postpartum kunye nendlela yokujongana nazo?
Iimpawu zoxinzelelo emva kokuphuma.
Uyacaphuka ngenxa yokukhala komntu owawukulindele ngokulangazela - ukukhala komntwana wakho. Ufuna ukufihla, ukufihla ekukhathazeni umama ongenakubekezeleka. Uziva ungakhuselekanga kwaye ucinezelekile, awuyi kushiya ukuba abantu bakho abasondeleyo kunye nabantu abasondeleyo bakhwaxela emva kwakho nokuhleka, bekulindele xa, ekugqibeleni, ubuncinane wenze iphutha, wenze into engalunganga, ngoko kuwe. Umntu omncinci, oye wathwala ixesha elide, ungumfokazi kuwe, awunomdla nokumthanda, ewe, wamzalela, kodwa akazange abe yintsapho yakho, eyakho. Ukukhungatheka okuqhubekayo, ukunyaniseka kwesini, ukuxhamla kumyeni wakhe - konke oku kuphawulekayo kwixhoba lokudakumba kokuphuma kwesithuba. "Ndiyatyebile! Isambatho sam intanda ayifanelekanga! "Awunelisekile kuwe, ukubonakalisa kwakho kwisibuko nokubonakala kwakho kukucaphukisa.
Ukudakumba kokudlulayo kufuneka ukulwe! Kutheni?
Okokuqala, ukudandatheka kwangemva kokubeleka kukubandezeleka kungekuphela kwakho, kodwa nangomntwana. Ukancinci kakhulu, ufuna ukunakekelwa kunye nokunakekelwa, uthando kunye nothando. Wayezalwa nje, kodwa sele evakalelwa kukuba ungumntu ongekho ngokupheleleyo. Kodwa ukudibana nomoya kubaluleke kakhulu kuye! Umama ugula, kuthetha ukuba umntwana uyagula. Akaziveki efunekayo, ekhuselwe kwaye ezolile.
Okwesibini, ukuba ubona ukuba imikhosi iyaphuma, ukuba akukho namandla ngaphakathi kwakho ukulwa nombandezelo wesimo, ungacingi ukuba yonke into iya kuphela. Khumbula ukuba unesihlobo, abantu abasondeleyo, cela uncedo kumama okanye udade wakho, mhlawumbi nokuba ngumkhwezana wakho okanye umkhwekazi wakho. Ungabi neentloni, wabelane ngeengxaki zakho, iimvakalelo zakho kunye nokwesaba nabo. Vala abantu baya kuqonda ukuba umama omncinane ufuna uncedo, uthando kunye nenkxaso.
Vumelana nomyeni wakho ukuba ubuncinane olunye usuku ngeveki ozibekayo, intanda. Makukuncede kwaye akulungiselele "usuku lokuzila". Yiya kwi-salon yobuhle, yenza i-hairdo okanye i-manicure, udibanise nemimoya emitsha, ncokola nomhlobo wakho othandekayo okanye nje uhambe-ukuhamba emoyeni omtsha kuya kukukhuthaza nokuphucula umbala. Mamela umculo, umdaniso, unokuba nomntwana ezandleni zakho. Ngakumbi "thetha" nosana lwakho: jonga amehlo akhe, ubambe isibambo, ubeke uhlangothi, ubenomathele ngesinyame sakhe ngesinyameko - uyavuya gqitha ngamaxesha anjalo! Fumana ubuthongo obuninzi-zama ukulala phantsi komntwana, ummbambe uze uhlale naye. Ungesabi, qalisa ukwenza into, kwaye uya kubona ukuba yonke into ihamba kakuhle kwaye iya kungena kwisiteshi sayo.
Iinzuzo zokuhlamba eTurkey
Iphulo lolwimi lusizi: izizathu kunye nendlela umntu angawususa ngayo intlungu
Iipropati kunye nokusetyenziswa kweoli yamathambo
Iintlobo ezine zabasetyhini abaxinezelekileyo kunabanye
Ukusebenzisa ioli efunekayo ye-orange
Iseshoni yebusika 2016 kwiiyunivesithi: ishedyuli, xa iseshoni iqalisa abafundi bexeshana
Njani ukunqoba ukuhlambalaza?
U-Evelina Bledans noSvetlana Bondarchuk badumala kwiifoto ezingcolileyo
Umvuzo "Umthi Wonyaka Omtsha"
I-Cottage ushizi kunye nemvubelo inhlama
Unokuyithintela njani ubuvila bakho